Honduras wepụtara ọhụụ mara mma maka ịkwalite njem nlegharị anya iji kwalite itinye ego
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Honduras » Honduras wepụtara ọhụụ mara mma maka ịkwalite njem nlegharị anya iji kwalite itinye ego
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ gbasara Honduras • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • News • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Dịka nsonaazụ nke mmemme Honduras2020, ọtụtụ ụlọ ọrụ ọha na eze na ndị ọrụ nzuzo sonyeere Onye isi ala Juan Orlando Hernández na ọrụ nnabata nke Iwu Ọganihu Mgbasa njem Ọhụrụ, nke National Congress nyere ya na uru mara mma iji mebie itinye ego na ọrụ na mpaghara ndị njem nke Honduras.
Honduras setịpụrụ onwe ya, ọrụ nke imepụta ihe mba na-akpali ndị na-etinye ego, si otú a mezuo ebumnuche nke ọrụ 250,000 na mpaghara ahụ, mgbakwunye ndị njem nleta nde 1 kwa afọ na ọnụọgụ abụọ nke mbupụ njem maka akụnụba mba, atụpụtara na Honduras2020 Mmemme.
Mba enweghi ọnọdụ di nma iji dọta ego na mpaghara ahụ. Agbanyeghị ịbụ otu n'ime mba ndị etiti America nwere ọtụtụ njem nlegharị anya na-enye nnukwu akụ na ụba nke akụ sitere n'okike, ogo uto ya na mpaghara a adịkarịghị 0.5% ma e jiri ya tụnyere mpaghara mpaghara ndị ọzọ nke uto afọ ha na-eru ọkwa ruo 7 %.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ jikọtara ọnụ iji wepụta usoro iwu ọhụụ maka ịkwalite njem, gụnyere mmekọrịta ọha na eze Honduras2020, Honduran Tourism Institute (IHT), Honduras National Tourism Chamber (Canaturh), Honduran Business Council (Cohep) na Honduran Tù Azụmaahịa nke Obere Hotels, n'etiti ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ndị ọchụnta ego sitere na mba niile, bụ ndị gosipụtara Congress iwu ahụ.
Iwu a, nke Onye isi ala Juan Orlando Hernández kwadoro, gụnyere ngwugwu nke ihe mkpali na-adọrọ adọrọ maka itinye ego na mpaghara na nke mba ọzọ ma n'otu oge ahụ na-eme ka uru ego na-enweta na-abawanye na oge. Ọ ghọkwara ihe dị mkpa iji mepụta ọrụ ndị na-adigide ọhụrụ site na itinye ego a tụrụ anya n'ime afọ ole na ole sochirinụ.
Akụkụ nke njirimara nke Iwu Njem Nleta bụ:
• Ngwọta nha anya iji kpalie ndị obere, ndị ọkara na ndị nnukwu Honduran na ndị ọchụnta ego si mba ọzọ itinye ego na mpaghara njem ndị njem na Honduras.
• Usoro iwu ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ndị dị ugbu a na-eme ntinye ego ọhụrụ maka ihe karịrị 35% nke ego mbụ ha.
• Fiscal nkwụsi ike nkwekọrịta
• Mkpali maka itinye ego nke mmadụ ma ọ bụ ndị iwu kwadoro
• Ego iji kwado ụlọ ọrụ ụgbọ njem ala na ikuku na njem.
• Ekwe omume ịtọlite ​​ego ntụkwasị obi ego
• Ndokwa pụrụ iche maka ikike ọchịchị na ụtụ isi
• Ego maka ulo oru mbo, nkwalite na akwalite njem nleta (FITUR) site na onodu di ala
• Ọrụ ego
Ọ dị mkpa ikwu na iwu nkwalite njegharị na-ahụ maka njegharị na-ekwe nkwa ịlaghachi ego na agbamume enyere, nke mezuru - n'etiti ndị ọzọ - site na:
• Mkpokọta ụtụ ahịa maka ebe obibi, ịzụta nri na mmanya na-aba n'anya, egwuregwu na ndị ọzọ
• Income tax / Sales tax collection ugwo si na họtel suppliers
• taxtụ ụtụ isi ahịa na-abawanye maka oriri nke ndị ọrụ sitere n'ọrụ ọhụrụ
• Nchịkọta eegwọ Ọrụ Nlegharị Anya
Atụmatụ na-atụ aro na enwere ike ịnweta ụtụ isi ọzọ nke ihe ruru ijeri US $ 4 ijeri n'ime afọ 18 na-esote site na iji usoro 60% obibi obibi.
Iwu a bụ akụkụ nke atụmatụ ka ukwuu nke ga-eme ka ngalaba ndị njem bụrụ ogidi nke ezigbo uto iji melite ogo ndụ nke ọtụtụ puku ndị Hondurans. Kedu nke gụnyere mmemme ọzụzụ ndị ahịa maka ndị ọrụ na ụlọ nkwari akụ dị mkpa, ihe ntụrụndụ na akụrụngwa obodo mepere emepe ka asọmpi dị ka ebe njegharị ụwa.
Tụkwasị na nke ahụ, ndị ọrụ si Honduras2020 kwupụtara na e nweelarịrị ndị na-etinye ego na mba na mba ụwa nwere mmasị itinye ego na Honduras site na ohere nke Iwu Nkwalite Njem Nleta ọhụrụ a ga-emepụta, nke ga-ekwupụta ntinye ego ọhụrụ na ụzọ ọrụ ọhụụ na ọnwa ndị na-abịanụ.